यी १० जवाफ, जसले चम्काउँछ तपाईंको करिअर
काठमाण्डौ । करिअरको सुरुवातमा तपाईंलाई सोधिने केही प्रश्नले तपाईंको भविष्य निर्धारण गरिदिन्छ । कुनै बेला हामी यस्ता प्रश्नहरुको सही उत्तर दिन सक्दैनौ र करिअर सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ठूलो झड्का लाग्नसक्छ । यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरु कम्तीमा एकदर्जन जति हुन्छन् । ‘यो पदमा तपाईलाई किन अवसर दिनु ? यदि तपाईंलाई यो अवसर हामीले दियौं भने...
आयल निगममा खुल्यो यति धेरै नयाँ जागिर, एसएलसी उत्तीर्णलाई पनि अवसर
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले खुल्ला प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति हुने गरी १२ पदमा ६२ जनाका लागि जागिरको अवसर खुलाएको छ । निगमको पदपूर्ति समितिले शनिवार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै उपप्रबन्धकदेखि मिस्त्रीसम्मको पदमा दरखास्त आह्वान गरेको हो । नयाँ जागिरहरुमा दरखास्त दिन स्नातक पढेकादेखि एसएलसी उत्तीर्णसम्मले पाउने...
कृषि विकास बैंकले माग्यो ६७ जना कर्मचारी, लेखा, कानून, व्यवसाय र कम्प्युटर अधिकृतका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमीटेडले खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने भन्दै विभिन्न ४ पदका लागि ६७ जनशक्ति मागेको छ । बैंकले तृतीय श्रेणीको अधिकृत स्तरको पदमा काम गर्ने गरी जनशक्ति मागेको हो । लेखा अधिकृत पदमा ११ जना, कम्प्युटर अधिकृत पदमा ६ जना, कानून अधिकृत पदमा १० र व्यवसाय अधिकृत पदमा ४० जना कर्मचारी मागेको छ...
व्यवस्थापनका विद्यार्थीलाई दुई माइक्रोफाइनान्समा जागिरको अवसर, दर्जनौ मागियो
काठमाण्डौ । देशका विभिन्न जिल्लामा काम गरिरहेका दुई माइक्रो फाइनान्स कम्पनीले आकर्षक तलब र सेवासुविधासहित दर्जनौंका लागि जागिरको अवसर खुलाएका छन् । नुवाकोटको माइक्रो फाइनान्स बित्तीय संस्था र विराटनगरको नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकले यस्तो अवसर खुलाएका हुन् । नुवाकोटमा कर्पोरेट कार्यालय र ललितपुरको कुपण्डोलमा सम्पर्क...
प्रमाणपत्र उतीर्णका लागि जागिरै जागिर, ९ विषयमा १११७ शिक्षक माग
काठमाण्डौ । प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेर शिक्षण तालिम समेत लिई बेरोजगार बसिरहनु परेको छ भने अब चिन्ता नलिनुहोस् । शिक्षक सेवा आयोगले सोमबार सूचना जारी गर्दै देशका पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सेवा गर्ने गरी विभिन्न ९ विषयमा १ हजार १ सय १७ निम्न माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि आवेदन मागेको छ । आयोगले सबैभन्दा धेरै अंग्रेजी विषयको शिक्षक मागेको...
वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयमा ३७ जनालाई जागिरको अवसर
काठमाण्डौ । वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले विभिन्न १४ पदहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भन्दै योग्य उम्मेद्वारबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ । आइतबार आवश्यकता सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै उपमहानगरपालिका कार्यालयले रिक्त १४ वटा पदमा ३७ जना जनशक्ति मागेको हो । उपमहानगरले सबैभन्दा धेरै नायव सुब्बा पदमा १५ जना...
व्यवस्थापनका विद्यार्थीका लागि खुशीको खबर, एनआइसी एशिया बैंकमा दर्जनौंलाई जागिरको अवसर
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले व्यवस्थापन पढेका वा सानातिना बित्तीय संस्थामा काम गरी अनुभव प्राप्तहरुलाई लक्षित गर्दै आफ्ना ४ वटा विभागको दुई दर्जन पदमा दर्जनौका लागि जागिरको अवसर खुलाएको छ । बैंकले ब्राञ्च मेनेजमेन्ट, कर्पोरेट बैकिङ/एसएमई, रिटेल र अपरेशन/सपोर्ट यूनिटका लागि जनशक्ति मागेको हो । ब्राञ्च मेनेजमेन्टतर्फ...
प्रहरीमा १५७ जना स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि जागिरको अवसर
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको मानव श्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट शाखाले बुधबार नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्यतर्फ १ सय ५७ प्राविधिक जनशक्ति मागेको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालतर्फ १ सय ४७ र केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालातर्फ १० जनाका लागि जागिरको अवसर खुलाएको हो । प्रहरीले सबैभन्दा बढी प्रहरी नायव निरीक्षक...
नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर बन्ने हो ? दिनुस् आवेदन
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीले जनपदतर्फको प्रहरी निरीक्षक पदमा ८६ जनाका लागि जागिरको अवसर खुलाएको छ । खुल्ला प्रतियोगितादारा पदपूर्ति गर्ने भन्दै बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभाग, भर्ना तथा छनौट शाखाले नयाँ भर्न सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको हो । इन्स्पेक्टर(प्रहरी निरीक्षक)मा खुल्लातफृ ४६ जना, अमर वा अशक्त...
एसएलसी र प्रमाणपत्र उतीर्णलाई वन पैदावारमा जागिरको अवसर
काठमाण्डौ । वन पैदावार विकास समिति, बबरमहल काठमाण्डौले विभिन्न ७ पदका लागि २८ कर्मचारी मागेको छ । रिक्त भनी खुलाइएका अधिकांश पदहरुमा एसएलसी उत्तीर्ण र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्णले आवेदन दिन सक्नेछन । रेञ्जर पदमा ६ जना जनशक्ति मागिएको छ । यो पदका लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित बिषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह...
विश्वमा सबैभन्दा बढी तलब कस्को ? डाटा साइनटिस्ट र सोल्यूशन आर्किटेक्टको !
काठमाण्डौ । कुनै एक समय थियो, जुन बेला इञ्जिनियर र चार्टर्ड एकाउण्ट(सिए)को नोकरी गर्दा सबैभन्दा बढी तलब पाइन्थ्यो, उनीहरुको भाउ समेत समाजमा निकै थियो, इञ्जिनियर र सिएलाई छोरी दिन मानिस मरिहत्ते गर्थे । तर प्रविधिले यस्ता दिनहरुमा तीव्र परिवर्तन गरिदिएको छ । हिजोका सिए र इञ्जिनियरको ठाउँ आज डाटा साइनटिस्ट, सोल्युशन आर्किटेक्टले लिएका छन् ।...
शिक्षित बेरोजगारलाई जागिरको अवसर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माग्यो ठूलो संख्यामा प्राध्यापक र उपप्राध्यापक
काठमाण्डौ । विभिन्न विषयमा डिग्री लिएर समेत बेरोजगार रहेका शिक्षित बेरोजगारहरुका लागि सुवर्ण अवसर । त्रिभुवन विश्व विद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले विभिन्न विषयका लागि ४९ जना प्राध्यापक र ५७ जना उपप्राध्यापक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने भन्दै योग्यहरुबाट आवेदन मागेको छ । मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै सेवा आयोगको...
व्यवस्थापन पढेकालाई जागिरको अवसर, मुक्तिनाथ बैंकले माग्यो डेढ सय कर्मचारी
काठमाण्डौ । व्यवस्थापन पढेर बेरोजगार हुनुभएको छ ? यदि त्यसो हो भने तपाईलाई जागिरको सुवर्ण अवसर सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय स्तरको मुक्तिनाथ विकास बैंकले मानव संसाधन मेनेजरदेखि ब्राञ्च मेनेजर हुँदै ट्रेनी असिस्टेन्ट(इन्ट्री लेभल)सम्मका पदहरुमा करिब १५० जनाका लागि जागिरको अवसर खुलाएको छ । बैंकले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी आधुनिक...
७३ जिल्लाका लागि ५ सय कृषि प्राविधिक माग, टीएसएलसीले पनि आवेदन दिनसक्ने
काठमाण्डौ । कृषि प्राविधिक बिषय पढेर पनि बेरोजगार हुनेहरुका लागि जागिरको सुवर्ण अवसर ! नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय कृषि विभाग हरिहर भवन, ललितपुरले करार सेवामा रही काम गर्ने गरी कृषि प्राविधिक पदमा ५ सय जनशक्ति माग गरेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को ‘एक गाउँ विकास समिति एक कृषि प्राविधिक’ स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम...
कोरियाको कोटा ३१ सयको, आवेदक ६० हजार ६ सय !
काठमाण्डौ । तीन हजार १ सयको कोटामा दक्षिण कोरिया जानका लागि करिब ६० हजार ६ सय युवाहरुले आवेदन फारम भरेका छन् । गत वर्षको तुलनामा दक्षिण कोरिया जानका लागि फारम भर्नेहरु तुलनात्मक रुपमा ह्वात्तै बढेका हुन् । गत वर्ष ८ हजारको कोटाका लागि ५१ हजार ५ सय युवाले मात्र आवेदन भरेका थिए । आगामी असार ४ र ५ गते दक्षिण कोरिया जान इच्छुक भई फारम...